Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA) Kora Bara 2013tti Seenaa fi Aadaa Oromoo Waliin Waaan Hedduu Mari’atee Perzdaantillee Filate
Oduu Afaan Oromoo- Wiixata
Oduu Afaan Oromoo- Kibxata
Hagayya 07, 2013
WASHINGTON,DC — Waldaan Qorannoo Oromo, (Oromo Studies Association) waldaa jireenna, qabsoo, seenaaa fi aadaa Oromoo hedduu irratti mari’achuuf baruma baraan kora taa’u.Korii barana WDC, Yuniversity Hawarditti taa’ellee 27essoo.
Marii baranaatti jireenna artistoota Oromoo biyya alaa jiranii,rakkoolee baqataa Oromoo biyya alaatti irra gahuutti jirtu jedhan waliin waan hedduu irratti waraqata qorannoo dhiyeessanii Washington DCtti kora guyyaa lamaa, Hagayya 3-4,2013 taahan.
Marii jireenna Oromoo malee OSA nama hedduullee ummataa hujii gugurdoo hojjatan jedhee kaan ammoo nama dhibii jabaatanii hojjachuuf fkn tahe jedhee nama afur badhaase.Hawaasa Oromoo Awustiraaliyaallee rakkoo Oromoo paarlaama biyya jiranitti lallabsiise jedhanii badhaasan.
Gama kaaniin ammoo namii biyya Amerikaa sadiilleen koruma OSA sun duratti kakatee Oromoomee waan Oromoo keessallee qooda qabachuuf waadaa gale.Nama dhiiraa lamaa fi ta nadheen tokko achumatti Roobaa,Lammii fi Jiituu jedhanii maqaallee baasaniif.
Tana maleelleen OSA perzdaantii bara hujii ufii fixate Dr.Moosisaa Aagaa irraa itti gaafatamaa Dr.Ibraahim Elemoo dabarse.
Mee qophii tana MP3 tana irraa caqasaa.